Kushone abangu-26 kuhlaselwa ibhasi ebelithwele amakholwa | News24
Kushone abangu-26 kuhlaselwa ibhasi ebelithwele amakholwa
Cairo – Isiteshi sikamabonakude sikahulumeni e-Egypt sibika ukuthi kubulawe okungenani abantu abangu-26 kwaphinde kwalimala abangu-25 abebesebhasini ebelithwele amakholwa enkolo yobuKristu iCoptic Christians, eningizimu ne-Cairo.
Umbiko walesi siteshi ucaphune izikhulu zezempilo zakuleliya lizwe neziveze ukuthi lokhu kuhlasela kwenzeke ngoLwesihlanu ngesikhathi leli bhasi lihamba emgwaqeni u-St. Samuel Monastery, eMinya, ebangeni elingu-220km eNingizimu nenhlokodolobha yase-Egypt.
OLUNYE UDABA: Kushone 22 kuqhuma amabhomu ekhonsathini ebiseManchester
Izikhulu zakuleliya lizwe zibika ukuthi abalisa abebezifihle ubuso bahlasele leli bhasi maqede bavulela ngenhlamvu ngaphambi kokuba babaleke.
“Basebenzise izikhali ezizishintshayo,” isikhulu sase-Egypt, u-Essam el-Bedawi, utshele isiteshi sikamabonakude.
Okhulumela uMnyango wezeMpilo, uKhaled Megahed, utshele lesi siteshi sikamabonakude ukuthi bangu-26 abantu ababulewe kwaphinde kwalimama abangu-25.
Okwamanje alikho iqembu lezidlamlilo ebelisaphumele obala ngokuthi yilona elihlaselile.
UBedawi uthi amaphoyisa asephume umkhankaso wokuthungatha abasolwa endaweni okwenzeke kuyo isigameko.
Lokhu kudubula kulandela isigameko sokubhonjwa ngoDisemba nango-Ephreli nalapho iqembu lezidlamlilo i-Islamic State (ISIS) laphumela obala lathi yilo elihlaselile.